फाइनान्स कम्पनीमा कुनको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं : धमाधम एक्विजिसनमा जान थालेका फाइनान्स कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका मध्ये केही एक्विजिसन प्रक्रियामा छन् भने कतिपय अहिलेसम्म मर्ज वा एक्विजिसनको तयारीमा लागेका छैनन् ।
धेरै फाइनान्स कम्पनी वाणिज्य बैंकसँग एक्विजिसनमा गएका छन् । पछिल्लो समय जेबिल्स फाइनान्स नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हाथवे फाइनान्स ग्लोबल आइएमई बैंकमा विलय भएका छन् । ललितपुर फाइनान्स प्राइम बैंकमा विलय हुने तयारीमा रहेको छ । दुवैबीच एक्विजिसनमा जाने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । यता, बेस्ट फाइनान्सले सिनर्जीलाई एक्वायर गरेको छ ।
यसैबीच नेप्सेमा सूचिकृत फाइनान्स कम्पनी मध्ये १८ वटा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार मिश्रित खालको प्रगति देखिएको छ ।
८ फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढ्यो
असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ८ फाइनान्स कम्पनीले चुक्ता पुँजी बढाएको छन् । यसअवधिमा सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी बढाउनेमा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स रहेको छ । प्रोग्रेसिभको चुक्ता पुँजी २७९.६५% ले बढेर ७९ करोड ७२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी भने युनाइटेड फाइनान्सको रहेको छ । यस फाइनान्सको पुँजी २६.२३% ले बढेर १ अर्ब १ करोड ५ लाख १९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यता, १० फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने गत वर्षकै यथावत रहेको छ ।
११ कम्पनीको जगेडा कोष बढ्यो, धेरै बढ्नेमा बेष्ट फाइनान्स
पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ११ फाइनान्स कम्पनीको जगेडा कोष बढेको छ । सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष बढ्नेमा बेष्ट फाइनान्स रहेको छ । यसको जगेडा कोष २२१.८०% ले बढेर २३ करोड ४४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सबै भन्दा धेरै जगेडा कोष हुनेमा गोर्खाज फाइनान्स परेको छ । यसको जगेडा कोष १११.६५% ले बढेर ६३ करोड ३४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यता, सम्वृद्धि र ललितपुर फाइनान्सको जगेडा कोष भने नोक्सानीमा रहेको छ । यसअवधिमा ५ फाइनान्सको जगेडा कोष घटेको छ ।
९ फाइनान्सको नाफा बढ्यो
असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ९ फाइनान्स कम्पनीहरुले नाफा बढाएका छन् । सबैभन्दा धेरै नाफा बढाउनेमा मल्टिप्रपोज फाइनान्स रहेको छ । फाइनान्सको नाफा २६८.९७% ले बढेर २१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअवधिमा रकममा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा आइसीएफसी फाइनान्स रहेको छ । नाफा घट्दा पनि आइसीएफसीको अरुको भन्दा कमाई धेरै छ । यस फाइनान्सको नाफा ३०.३९% ले घटेर ३ करोड ५ लाख ७७ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । यद्दपि, यो नै धेरै नाफा कमाउने फाइनान्स कम्पनी हो । सम्वृद्धि, रिलायन्स र सटी एक्सप्रेस फाइनान्स नोक्सानीमा रहेका छन् । ६ फाइनान्सको नाफा गत वर्षको भन्दा घटेको छ ।
कुन कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
८ कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ । सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी बढाउनेमा सेन्ट्रल फाइनान्स रहेको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी १३ रुपैयाँ ३७ पैसाले बढेर १४ रुपैयाँ २६ पैसामा आएको छ । गत वर्ष यसको प्रतिसेयर आम्दानी ८९ पैसा थियो । सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको रहेको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ०२ पैसाले बढेर १४ रुपैयाँ ६३ पैसामा आएको छ । सम्वृद्धि, सिटी एक्सप्रेस र रिलायन्स फाइनान्सको प्रतिसेयर आम्दानी ऋणात्मक छन् ।
* तत्कालीन वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीले नाम परिर्वतन गरेर सम्वृद्धि फाइनान्स राखेसँगै यो त्रैमासबाट यसै फाइनान्सको नामबाट वित्तीय विवरण निकालेको छ । उक्त वित्तीय विवरणलाई गत वर्ष वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङमा प्रकाशन गरिएको विवरणसँग तुलना गरिएको छ ।